Safrida Si Strasbourg By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Safrida Si Strasbourg By tareenka
(Last Updated On: 17/03/2020)
Markii nin socoto ah sheegaye booqanaya France, dadka intooda badan isla markiiba uu doonaynin ka fikir Paris. Si kastaba ha ahaatee, caasimada France ma aha magaalada kaliya ee mudan in booqashada ee dalkan quruxda badan, U safarka Strasbourg waa IN cusub. meelo kale oo badan oo waa sida istaahila mahadnaq ah oo dhan indhaha qurux badan iyo waayo-aragnimada ay ku siin karaan.
Strasbourg waa mid ka mid ah kuwa magaalooyinka in aan mahad kartaa in ka badan, labada quruxdiisa oo faro badan wax ay halkaas u sameeyaan. Ku safrid tareen si Strasbourg ka magaalooyinka waaweyn ee Yurub la doonayo in aad neefta qaado. Aynu eegno dhow at sida aad si this safri kartaa caga fantastic iyo waxa aad ka arki kartaa oo waxaa qaban:
Marka Socdaalka Si Strasbourg Booqo Strasbourg Cathedral The
Cathedrals ka muddada Dr Makumbe waxaa faraxgelinta, baqeen-dhiirigalin leh oo si fudud u yaab badan si ay u sahamiyaan. Oo Strasbourg cathedral taagan iyaga ka mid dheer - macno, sida in ay dhismaha dunida ugu dheer ilaa isticmaalo 1874! qaybo ka mid ah waxaa ka mid ah taariikhda marka dib loogu noqdo 1100, taas oo markhaati ka ah sida dhabta ah sida dheer dhismeedka taariikhiga ah ayaa taagan. Haddii aad doorato in aad sahamin gudaha ama eekaan logu Aamino, aad ku socoto in ay wacdaro.
Nancy in Tareenadu Strasbourg
Qaado Sawirada La Petite France
Stepping galay La Petite France ayaa dareensan in ku dhowaad sida dib wakhtiga. Iyada oo qaab-dhismeedka madow iyo caddaan quaint nus-timbered Mire Waqaf oo in degmada in loo isticmaalaa in ka tirsan baayacmushtariyaasha cayn kasta, jidadka ka samysan, iyo dhaqanka maqaayado, waa meel aad u leeyihiin in ay la kulmaan. qaado sawiro iyo naftaada qiyaasi in waagii hore.
Marseilles in Tareenadu Strasbourg
Dijon in Tareenadu Strasbourg
Lyon in Tareenadu Strasbourg
Raaxeysan in cunnada ay Local
Waayo, dalxiisayaal cuntada, waxaa jira a dawayn gastronomical gaar ah in la waraystay markii safarka Strasbourg: cuntada Alsatian, oo gaar ah khamri iyo biirka. Strasbourg talisa gobolka Alsace ah, halkaas oo khamri raagay oo intooda badan varietal, iyo labada ugu weyn in la isku dayo waa Gewürtztraminer iyo Riesling. Xubnuhu dambe la kalluun digsiga-shiilay ama garnie Choucroute, Classics Alsatian si fiican u yaqaan, iyo ku farxi aad dhanxanegga.
Cologne si Tareenadu Strasbourg
Lille si ay Tareenadu Strasbourg
Zurich si Tareenadu Strasbourg
Metz in Tareenadu Strasbourg
Qaado Trip Doon A Qiyaastii Strasbourg
Hab kale oo aad u fiican ee sahaminta Strasbourg waa via geeyo doon. Waa fursad aad u qurux badan si aad u hubiso soo baxay qaar ka mid ah indhaha ku ugu quruxda badan ee magaalada oo ay bartaan oo ku saabsan taariikhda waqti isku mid ah. Waxaa jira fursado badan masaafo doon uu ka soo xusho, oo laga yaabo in aad ka hesho labo ka mid ah fikradaha sida ay u oo kulkulul si ay u soo socda booqan.
Strasbourg ayaa labaad ee ugu weyn boosteejada tareenka ee France, midig ka dib markii Paris. waxaa qabanaya tareen waa sahlan, oo waxaad fursad u haysataa qaadashada ah -Xawaaraha sare TGV tareenka (xawaaraha tareenada.) Waxa aad qaadan karto ka Paris si Strasbourg ee kaliya 2 saacadood oo 20 daqiiqo, halkii caadiga ah 4 saacadood baabuur by.
Taasi waxay sidoo kale ka dhigan tahay in waqtiyada safarka magaalooyinka kale ee waaweyn ee Yurub ayaa sidoo kale aad u gaaban. Haddii aad u safraya Strasbourg ka Switzerland, Belgium, Netherlands, Germany, iyo dalalka kale ee Yurub iyo magaalooyinka, waxaad ka heli kartaa in Strasbourg si fudud oo si deg deg ah. Raadi xidhiidhada habeenkii haddii aad tahay on a miisaaniyadda la adkeeyo maxaa yeelay, tigidhada waa kuwa inta badan ka jaban.
Ready in ay wakhtiga aad nolosha sahaminta magaalada soo jiidasho badan ee Strasbourg? Jartaan tikidhka tareenka aad hadda, oo wuxuu ku raaxaysan labada safarka iyo caga.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#alsace #sncf europetravel strasbourg tgv trainjourney Tranride tareen safarka travelfrance